Herrega furmaata Investmentii - Oromia International Bank
Herregni furmaata investmentii jechuun karoora qusattoonni ivestimentii isaanii bakkaan ga’uuf banamu yeroo ta’u herregni qusannoo furmaata investimentii faayidaa adda ta’ee fi yeroo murtaa’e qofaafi.
Maamilli yeroo daangeffame dura maallaqa isaa fudhachuu yoo barbaade haala waliigaltee isaatiin ykn adabbiin jechuun maallaqni gaafa baasii ta’ee kaasee dhala hin qabaatu.
Qusannoo idilee irraa hangi dhalaa adda ta’uu mala.
Amaloota bu’uuraa herregichaa
Herrega kana ayyaanotaaf,yeroo boqonnaaf yookaan dhimmi biraaf kan qusatamu yemmuu ta’u abbaan herregichaa herrega kana banuudhaan dhimmoota kana jechuun karoora pirojectii, boqonnaa, imala cidha yookaan eebba fiixaan baafachuuf herrega banamudha.
Herrega nama dhuunfaan ykn gareen socho’udha
Herregichi yeroo jalqaba banamu baankiin hojii adda baasuu hojjechuu qaba.
Qusannoon idilee Guyyaa,Torbaniin ykn Baatiin, ta’uu danda’a
Daangaa yeroo taa’een ala maamilli maallaqa baasii gochuu hin danda’u
Yeroon isaa gaafa ga’u maamilli maallaqa isaa dhala isaa wajjin fudhachuu danda’a.
Tajaajila Baankii Elekroonikii